Pedicure kwabesifazane - Kunjengoba inqubo ebalulekile njengoba ukwakheka noma kwekhanda. Ake iminwe manicured ubonakala ngaso sonke isikhathi, kodwa ukuqaphela ukuthi onikezwe izinyawo zakhe marafet umnyuziki nezinzipho are fuduka phezulu, njalo unikeza ithemba. Pedicure futhi akuyona njengoba inqubo yezimonyo njengoba aphulukise umzimba. On the ngezinyawo abantu kuyinto lenqwaba kwalapho kuhlangana khona imizwa futhi amaphuzu kuhlobane ngokuqondile umzimba. Lapho ukuhlanza stop amangqamuzana afile futhi ukugcwala kwamanzi emzimbeni uqala "ukuphefumula."
Amantombazane amaningi ukhohlwe pedicure, bakubheka njengobuthakathaka inqubo yezimonyo engabalulekile. Kodwa udinga ukuba banakekele esiyinkimbinkimbi kakhulu, ungakhohlwa izinyawo. Ikakhulukazi inqubo pedicure and qualitative kungaba ekhaya. Ngakho, i-pedicure ekhaya: izeluleko namathiphu ukuze ladies.
Pedicure ngaphandle kokushiya ekhaya lakho, kufanele uqale nge okugeza steamed ukuthi ithambisa isikhumba. Ngokulandelayo, asule izinyawo zakho ithawula futhi sisebenzise sezingubo cuticle, okuyinto okuthengiswa ezitolo yezimonyo in kanye ekhemisi. Ngemva kwemizuzu engu-Five, ngosizo induku lokhuni, ukuhambisa cuticle. Beka unyawo emuva emanzini, wazesula off futhi ukuqala pedicure ekhaya.
Foot okugeza: zokupheka
ethandwa kakhulu herbal foot okugeza ekhaya. Uma ufuna ukubabulala izinyawo ukhunta, uhlanganise amabili wezipuni of chamomile, oluhlaza, horsetail, futhi flaxseed. Lokhu okugeza ithambisa isikhumba Horny nokusiza kakhulu umphumela elwa namagciwane.
okugeza Wellness: Thela amanzi abilayo eziyikhulu amagremu izimbali Linden, kamuva isigamu sehora, hlambulula ngamanzi kanye isipuni sikasawoti. Le nqubo ngeke usizo ukuqeda ukuvuvukala.
Foot calendula kanye Hypericum elisetshenziswa waphuka. Thatha ezimbili wezipuni wort St kaJohane, futhi ithisipuni elilodwa calendula, bay elilodwa lamanzi abilayo. Khona-ke kudingeka uzinike umhluzi ezomile ezinyaweni zakhe. Ngaphezu kwalokho Spread unyawo cream massage.
Toning umhluzi: ikhaya pedicure engenziwa nge ugqoko ikufaka umdlandla. Ukuze wenze lokhu, thatha amathonsi ezinhlanu peppermint futhi amabili wezipuni kasawoti kusukela oLwandle Olufile. Gcina izinyawo zakho kufanele kube hhayi angaphansi kwamaminithi amabili.
Ukuze balahle izithende aqhephukile, kudingekile ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa izinyawo ngamanzi afudumele futhi boric acid buhlanjululwe: ithisipuni elilodwa inkomishi yamanzi ngalinye. Okulandelayo isicelo Vaseline futhi Songa usimende, ushiya konke ngobusuku. Phinda pedicure ekhaya ugqoko kuze kube ufa azizange zinyamalale.
Ugqoko for Ngokuphambene izinyawo. Esikhathini isitsha sokuqala, uthele amanzi ashisayo ka angaba amashumi amathathu nesishiyagalombili degrees. Kwenye isitsha amanzi abandayo akuyona degrees ezingaphezu kuka nanhlanu. Enye minutely kokubili umthamo, ukwehlisa izinyawo zakhe emanzini. Phinda kasikhombisa, zinyanga ukuba okugeza ngamanzi.
Ngemva ukucutshungulwa uqhubekele izinyawo nail. Inqubo iqala pedicure ekhaya uyaxebuka. Zama onqenqemeni nzima uhlikihla izinyawo, isithende futhi isithupha - ke izindawo inkathazo isikhumba olunzima. Ngemva bazihlikihle izinyawo, kufanele ugeze off okubangelwa uyaxebuka futhi asule izinyawo zakho.
Ucedzela inqubo ekhaya - isicelo nail ekhethiwe. Oku ukususa izinsalela ebusweni lacquer nail ayengaphansi futhi degrease umkhiqizo wawo muhle ngaphandle acetone. I ukuvenisha kufanele zisetshenziswe izingqimba ezimbili, sivumele izinzipho ukuze ome kahle. Ungalokothi sula zaveza nezinzipho hairdryer, kusukela kule ukuvenisha uqala exfoliate ngisho ngokushesha.
Senifeze konke lezi izinqubo ingafingqwa, pedicure yakho sekuphelile! Uma uthi nhlá, inqubo eyinkimbinkimbi yezimonyo esicacile. Indlela yokwenza pedicure ekhaya? Landela lezi ziqondiso njalo bese ulandela amathiphu ke izinyawo zakho ngokuphelele enhle futhi zigcinwe kahle ngaso sonke isikhathi.
Indlela ukupenda izinzipho ezandleni zakhe? A izimiso ezimbalwa ezilula
Gel nail Polish - manicure izinga amasonto ambalwa
Idili sasondelana: izici eziyinhloko
Radeon HD 6450: Ukubuyekeza
Imfundo Akuphelele ephakeme. Izici, ngebuhle nebubi
-Gmail namaqhinga baqaphe ukuze kwandiswe umkhiqizo wabo
Umlingisi Dzhon Shnayder: Biography, amabhayisikobho engcono
Assumption - umthandazo zenjabulo nengokomoya
Russia - lelitimele. Inzuzo nekulahlekelwa we Russian Federation. Umlando Russia njengelive lelitimele
Ngo kokukhulelwa, "Clexane": izici isicelo, imiyalelo kanye impendulo